ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ် ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရန်ကုန်ဘတ်(စ်)ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။ (က) 200 AH Battery - Maintenance Free - 400 NOS 150 AH Battery - Maintenance Free - 18 NOS ( ခ) Gear Oil HD 80 W-90 - 29 Drums...
Posted Date :08-Feb-2019
Expire Date :08-Feb-2019
YUPT က ခရီးသည်တင်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန် ဘတ္ထရီ များအား...
YUPT က ခရီးသည်တင်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုရန် ဘတ္ထရီ များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ၀ယ်ယူမည်ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (YUPT) က ခရီးသည်တင်ယာဉ် များတွင် အသုံးပြုရန် ဘတ္ထရီ N-150 (၁၀၀)လုံး နှင့် N-200 (၁၀၀) လုံးဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းများကို (၂၄.၉.၂၀၁၈) ရက် (တနင်္လာနေ့)မှစ၍ (၉း၃၀ နာရီမှ&...
Posted Date :24-Sep-2018
Expire Date :08-Oct-2018
သတင်းစာပုံနှိပ်လုပ်ငန်း မှ ထွက်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ...
သတင်းစာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက် (စစ်တွေ)ရှိ သတင်းစာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ကိုယ်ပွားသတင်းစာတိုက် (စစ်တွေ)တွင် ၂၁. ၉. ၂၀၁၈ မှ ...
Posted Date :21-Sep-2018
Expire Date :28-Sep-2018
နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့မှ အိတ်ဖွင့်...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့လဟယ်မြို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ပန်ဆောင်မြို့ရှိ ဒေါ်ခင်ကြည် ရိပ်သာအဆောင်အမှတ်(၂) အုတ်တိုင်၊ အုတ်နံရံ နှင့် RC ကြမ်းခင်း နှစ်ထပ်(၈၀ပေ ၆လက်မ×၃၀ပေ ×၂၀ပေ) အဆောက်အအုံကို ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့် ၎င်းအဆောက်အအုံ၏ မူလပုံစံမပျက်အသစ် ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရန် အိတ်ဖွင့်...
Posted Date :10-Sep-2018
Expire Date :10-Oct-2018
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ၂၀၁၈-၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Network...
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ၂၀၁၈-၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Network Installation (Chin State Government Webportal) လုပ်ငန်းအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ၂၀၁၈-၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Network Installation (Chin State Government Webportal) လုပ်ငန်းအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။တင်ဒါပုံစံ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းများကို (၇....
Posted Date :07-Sep-2018
Expire Date :21-Sep-2018
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေကွက် ၁ ဒသမ ၉၄ ဧကပေါ်တ...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေကွက် ၁ ဒသမ ၉၄ ဧကပေါ်တွင် ဈေးအဆောက်အအုံများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၆စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပုလဲမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအဖွဲ့ပိုင်ဈေး အလျား (၅၂၀’)၊ အကျယ် (၁၆၇’) မြေကွက် ၁ ဒသမ ၉၄ ဧကပေါ်တွင် ဈေးအဆောက်အအုံများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။အဆိုပါဈေးအတွင်း (က)ဈေးဆိုင်ခန်း (သံထည်) ၁၀’ x ၁၀’ x ၁၂’ ဆိုင်ခန်း (၈၀...
Posted Date :06-Sep-2018
Expire Date :06-Oct-2018
ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေနေရာတွင် Shopping Mall၊ ရုံးခန်း၊ ဟိုတယ် များ BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် EOI ခေါ်ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၅စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေနေရာ(၀ဒသမ၃၅၉)ဧက တွင် Shopping Mall၊ ရုံးခန်းများနှင့် ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည့် အဆောက်အအဦများ တည်ဆောက်ရေးကို BOT စနစ်ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန...
Posted Date :05-Sep-2018
Expire Date :05-Oct-2018
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက ရော်ဘာ (၅၆၀ ဒသမ ၁၇) တန်အား အိတ်...
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက ရော်ဘာ (၅၆၀ ဒသမ ၁၇) တန်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသွားရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက ရော်ဘာ (၅၆၀ ဒသမ ၁၇) တန်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။တင်ဒါပုံစံများကို (၃.၉.၂၀၁၈) ရက်မှ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက်အထိ ရုံးချိန်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းရေးဌ...
Posted Date :03-Sep-2018
Expire Date :13-Sep-2018
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ကြာမှောက်ကြာလှန်နှင့် ကိုယ်လု...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ကြာမှောက်ကြာလှန်နှင့် ကိုယ်လုံးတော်ဧရိယာမားကို ကြေးပြားဖြင့် ပန်းတဉ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆိုပြုတင်သွင်းရန် ခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ကြာမှောက်ကြာလှန်နှင့် ကိုယ်လုံးတော်ဧရိယာမားကို ကြေးပြားဖြင့် ပန်းတဉ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အဆိုပြုတင်သွင်းရန် ခေါ်ယူထားသည်။ထိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းလိုသူများသည် အဆိုပြုလွှာ...
Expire Date :20-Sep-2018
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးလက်လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများအား ဆောက်လုပ်ရန် တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးလက်လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများအား...
Expire Date :01-Oct-2018
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းက ကျွန်းနှင့် သစ်မာခွဲသားမျိုးစုံအား...
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းက ကျွန်းနှင့် သစ်မာခွဲသားမျိုးစုံအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနက ကျွန်းနှင့် သစ်မာခွဲသားမျိုးစုံအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် နိုင်ငံသားများအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနမှ ကျွန်းခွဲသား အရွယ်စုံ ( ၈၂ ဒသမ ၅၄၉၅) တန်၊ ကျွန်းလျှာထိုး (ပကာ) ( ၁ ဒသမ ၆၁၅၄)တန်၊ ကျွန်းလျှာထိုး (၁ ဒသမ ၀၂...
အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် မိတ...
အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် မိတ္တူဆိုင်တို့အား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဆိုင်ခန်းငှားရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၃အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် မိတ္တူဆိုင်တို့အား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (အောက်တို ဘာမှ စက်တင်ဘာလအထိ) ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဆိုင်းခန်းငှားရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည်။တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို (၅.၉.၂၀၁၈) ရက်တွင် စတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာ တင်သွင်...
Expire Date :18-Sep-2018
UNDP ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စံကိုက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမျ...
UNDP ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စံကိုက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊ သံတွဲမြို့နယ်၏ ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းမှ သံတွဲမြို့နယ်၊ လှေကြီးချိုင်ကျေးရွာနှင့် ခမောင်းတုန်းကျေးရွာများတွင် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP)၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စံကိုက်ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲများ တည်ေ...
Posted Date :01-Sep-2018
သံကူကွန်ကရစ်တံတား နှင့် တံခွန်တိုင်း - ဘိုးဝကုန်း - ဂုံ...
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊ သံတွဲမြို့နယ်၏ ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းမှ သံတွဲ မြို့နယ်အတွင်း ကွေ့ချောင်းနှင့် ဆိပ်ကြီးသို့ ဆက်သွယ်သော သံကူကွန်ကရစ်တံတား (၄၀’ X ၂၄’ X ၁၃’) နှင့် တံခွန်တိုင်း - ဘိုးဝကုန်း - ဂုံးမင်းချောင် - တောင်ပေါက် - မြပြင်လမ်း (၂/၄.၅၄) မိုင် (4.108km) အား မြေသား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ချောလမ်း လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကုလသ...
ဘော့ချောင်းရေထိန်းတံခါး၏ မြစ်အပေါ်ဘက်တွင် ကမ်းပါးထိန်း...
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ သန်လျင်ဘက်ကမ်း၊ ရန်ကုန်-သန်လျင် တံတားအမှတ်(၁) နှင့်အမှတ်(၂)(ကုလားဝဲ)တံတားကြားရှိ ဘော့ချောင်းရေထိန်းတံခါး၏ မြစ်အပေါ်ဘက်တွင် ကမ်းပါးထိန်းနံရံများ ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပဏာမအားဖြင့် (Bank Protection Structure ) ၁၅၀၀)ပေတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း။ ၂။ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ သန်လျင်ဘက်ကမ်း၊ ရန်ကုန်-သန်လျင်...
Posted Date :26-Jun-2017
Expire Date :05-Jul-2017
လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မော်တော်ယာဉ်များအား ရောင်းချလိုသဖြင့် ချိတ်ပိတ်တင်ဒါကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ 1. TOYOTA Hiace, White, 3000cc, 164330 KM, 1997/2000 ရုပ်ပြောင်း တင်ဒါပိတ်ရက် - ၂၀-၀၆-၂၀၁၇ တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ထုတ်ယူနိုင်ပြီး၊ အသေးစိတ် စုံစမ်းလိုပါက အမှတ် ဇ (၁၂၊၁၃)၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်း၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့ ဖုန်း- ၀၈၂- ၂၅၁၂၄...
Posted Date :07-Jun-2017
Expire Date :20-Jun-2017
The Global New Light of Myanmar သတင်းစာတိုက် အိတ်ဖွင့်တ...
The Global New Light of Myanmar သတင်းစာတိုက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၆/၂၀၁၇) ၁။ The Global New Light of Myanmar သတင်းစာတိုက်တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ကုန်ကြမ်းများအား ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအရောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ၀ ယ်ယူလိုပါသည်။ စဉ် ကုန်ကြမ်းအမည် ၀ယ်ယူမည့်ပမဏ ကုန်ကြမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (က) ၆၄ လက်မစက္ကူ (1626mm) (၁၅၀၀)တန် (Standard newsprint Paper) 45gsm,C...
Posted Date :23-Mar-2017
Expire Date :05-Apr-2017
American Refugee Committee(INGO) မှ Desktop Computer (က...
တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ကြော်ငြာ American Refugee Committee(INGO) မှ Desktop Computer (ကွန်ပျူတာများ)၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။ -Dell Computer, Monitor, UPS - 20 set တင်ဒါစာရွက်ထုတ်ယူရန် နှင့် တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာ တိုက်(T-2) ၊ ရွှေအင်ကြင်းရိပ်မွန် ၊ သံသုမာလမ်း နှင့် ဝေဇယန္တာလမ်းထောင့် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ် ။ တင်ဒါလက်ခံသည့်ကာလ - ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၇ မှ ၂၂ - ၃ - ၂၀၁၇ တင်ဒါကိစ္စ စုံစမ်းမေး...
Posted Date :15-Mar-2017
Expire Date :22-Mar-2017
Myanmar Distillery Co.,Ltd မှ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများငှား...
အိတ်ပိတ်တင်ဒါ(Close Tender) ခေါ်ယူခြင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ လိပ္ပုတ်ကျေးရွာ ၊ အမှတ်(၄)လမ်းမအနီး ၊ Myanmar Distillery Co.,Ltd မှ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများငှားရမ်းလိုပါသဖြင့် အိတ်ပိတ်တင်ဒါများပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ နေ့/ည လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဦးရေ (၃၁)ဦး ၁။ တင်ဒါပေးသွင်းမှုကို ယခုကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ ၂၀ - ၃ - ၂၀၁၇ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်တင်သ...
Expire Date :20-Mar-2017
အိတ်ပိတ်တင်ဒါ (Close Tender ) ခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ပိတ်တင်ဒါ (Close Tender ) ခေါ်ယူခြင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ လိပ္ပုတ်ကျေးရွာ ၊ အမှတ်(၄)လမ်းမအနီး ၊ Myanmar Distillery Co.,Ltd မှ အယောက် (၄၀)ဆံ့ (14') DYNA Ferry ကားငှားရမ်းလိုပါသဖြင့် အိတ်ပိတ်တင်ဒါများပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ Ferry လမ်းကြောင်း လိုအပ်သောကား အစီးရေ စက်ရုံ မှ မှော်ဘီ...
Posted Date :03-Mar-2017
Expire Date :17-Mar-2017